Maxay QM ka tiri maalgashiga Turkiga ee Somalia ee gaaray halka bilyan? | Warkii.com
Home warkii Maxay QM ka tiri maalgashiga Turkiga ee Somalia ee gaaray halka bilyan?
Maxay QM ka tiri maalgashiga Turkiga ee Somalia ee gaaray halka bilyan?
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa markii ugu horreysay si faah faahsan uga hadlay maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya iyo taageerada uu siiyo dowlada dhexe.
Swan oo la hadlayey wargeyska Daily News ayaa marka hore boggaadiyey sida hagar la’aanta ah ee ay xukuumadda Ankara u garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale wuxuu shaaciyey in maalgashiga iyo kaalmada horumarineed ee Turkiga ay sare u qaaday kobaha dhaqaalaha ee dalka, ayna yareysay shaqo la’aanta.
“Waxaan aragnaa jawaabta Turkiga ee baahiyaha muhiimka ah. Dadaallada Turkiga ee ku aaddan dhismaha waddooyinka [ama] shirkadaha gaarka loo leeyahay ee lagu horumarinayo shaqada iyo waxqabadka garoonka si loo hubiyo in howlaha dekedda ay saameyn ballaaran ku yeesheen dhaqaalaha, gaar ahaan magaalada Muqdisho,” ayuu James Swan.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in dhammaan kaalmadaas ay muhiim u tahay kaabayaasha dhaqaale ee dalka Soomaaliya
“Kuwani waa qaybo muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka,” ayii sii raaciyey ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Taageerada Turkiga ee Soomaaliya, gaar ahaan dhanka maalgashiga ayaa maanta gaartay qadar dhan $ 1 bilyan oo aysan ku jirin howlaha bani’aadanimo iyo horumarka.
James Swan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in tababarada Turkiga uu siiyo ciidamada Soomaaliya au door weyn ka qaadaneyso awooda iyo dhismaha Xoogga Soomaaliyeed.
“Taageerada balaaran ee loo fidiyay barnaamijka tababarka ciidamada ee Turkiga waxay gacan ka gaysatay dhismaha awooda amniga ee Soomaaliya. Tani waa muhiim maxaa yeelay, ugu dambeyn rajada laga qabo waxay tahay in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan mas’uuliyadda koowaad ee amniga qaranka,” ayuu markale yiri Swan.
Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa haatan ka dhexeeyo xiriir xoogan iyo iskaashi dhinacyo kala duwan leh oo soo billowday, tan iyo sanadkii 2011-kii.
Previous articleMursal oo ku dhowaaqay guddi bilaabayo baaris cusub
Next articleWeerar loo adeegsaday Toorey oo ka dhacay Boosaaso & khasaare ka dhashay
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Amb. James Swan oo saacadihii u dambeeyay ku sugna dalka Qatar, ayaa kulano...